Akụkọ - Ụzọ mmezi nke mgbapu mmiri mmiri
Ụzọ mmezi nke mgbapu mmiri mmiri mmiri
Mgbe ogologo oge nke iji, na mgbata mmiri ga -enwe nsogbu mmejọ dị iche iche, na mfu mmiri bụ otu n'ime ha. A na -akwado ịchekwa ọkụ na nchekwa gburugburu ebe obibi, yabụ mgbe ọkpọ mmiri na -awụsa, ọ kwesịrị ka edozie ya n'oge ma ọ bụ jiri ihe ọhụrụ dochie ya. mgbata mmiri.Ndị mgbapụta mmiri mmiri bụ ihe a na -ahụkarị. Ụfọdụ obere nsogbu nwere ike imezi n'onwe gị. Ọ bụrụ na ị kpọọ ọkachamara, mgbe ụfọdụ ị nweghị ike ịnagide ha n'oge. Kedu ihe na -ebutekarị mgbapụ mmiri mmiri mmiri? Kedu usoro mmezi ihe nrụrụ mmiri mfu nwere?
N'ozuzu, ọkpọ mmiri ahụ bụ nke mmiri ọkụ na mmiri oyi, yabụ enwere ntinye mmiri abụọ. N'elu pọmpụ ahụ, e nwere ihe na -acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara. Akara na -acha anụnụ anụnụ na -anọchite anya mmiri mmiri oyi, nke na -acha ọbara ọbara na -anọchi anya mmiri ọkụ. Mmiri ahụ na -esi na ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche apụta site n'ịtụgharị n'akụkụ dị iche iche. Nke a bụ otu ụkpụrụ dị ka uwe ịsa ahụ n'ime ime ụlọ ịsa ahụ, Ọdịdị dị mkpa nke pọmpụ ahụ nwekwara aka ya, nke enwere ike iji rụọ ọrụ pọmpụ ahụ iji tụgharịa n'enweghị nsogbu. A na -eji mkpuchi elu arụzi ihe owuwu nke ọkpọ mmiri. Ejiri mgbanaka akpụkpọ anụ kpuchie ya, na ala bụ ntinye mmiri abụọ iji hụ na ejiri mgbata mmiri eme ihe.
1. A naghị emechi mgbata ahụ nke ọmaỌ bụrụ na emechighị mgbata ahụ nke ọma, ọ nwere ike ịbụ n'ihi na akpaaka gasket dị n'ime mgbata emebiwo. Enwere gaskets plastik na pọmpụ, na ịdị mma gaskets n'ụdị dị iche iche dịkwa oke iche, mana na nke a, naanị dochie gaskets!
2. Mmiri seepage gburugburu isi mmiri valvụ
Ọ bụrụ na e nwere nsị mmiri n'akụkụ isi valvụ nke ọkpọ mmiri ahụ, ọ nwere ike bute oke ike mgbe ị na -atụgharị ọkpọkọ n'oge ndị nkịtị, na -ebute ịtọpụ ma ọ bụ nkewa site na igwe arụnyere. Naanị wepu ma wụnye pọmpụ ahụ ma mechie ya. Ọ bụrụ na ọwa mmiri juputara nke ukwuu, ekwesịrị iji gluu iko kaa ya.
3. Oghere mkpọchi nke mgbata na -agbapụta
Ọ bụrụ na ọkpọkọ mmiri nwere mmiri nsị na nsogbu nsị, ọ nwere ike bụrụ na mkpuchi mkpuchi nwere nsogbu. N'oge a, naanị wepu pọmpụ ahụ iji hụ ma gasket ahụ dara ma ọ bụ gbajiri, ọ bụrụhaala na ọ rụziri ma dochie ya n'oge!
4. Mmiri nsị na nkwonkwo ọkpọkọ
Ọ bụrụ na ọwa mmiri dị na njikọ nke ọkpọkọ ahụ, ọ bụ isi ihe na -akụpụta mmiri na -atọpụ ma ọ bụ daa nchara n'ihi ogologo oge ọrụ. Zụta nke ọhụrụ ma ọ bụ tinye mgbakwunye ọzọ iji gbochie nsị mmiri.
Enwere isi ihe abụọ ị ga -elebara anya mgbe ọkpọ mmiri na -agbapụta. Nke mbụ, mgbe ọkpọ mmiri ahụ na -agbapụta mmiri, ekwesịrị imechi ọnụ ụzọ ámá iji zere “idei mmiri” n'ụlọ. Nke abụọ, ekwesịrị ịkwadebe ngwaọrụ mmezi, yana idobe akụkụ ndị ahụ ewepụrụ n'usoro, ka ịghara inwe ike itinye ya.
Na ndụ kwa ụbọchị, anyị kwesịrị iji ọkpọ mmiri ahụ eme ihe nke ọma. Anyị enweghị ike ịgbanye ọkpọkọ oge ọ bụla. Anyị kwesịrị ịzụlite agwa dị mma ma debe ya n'ọnọdụ eke. Naanị n'ụzọ dị otu a ka anyị nwere ike isi gbochie mgbochi mmiri ịwụfu.
Oge ezipụ: Mee-12-2021